TONTOLON’NY ASA :: Mbola vitsy ireo mpiasa an-trano misitraka ny fiarovana ara-tsôsialy • AoRaha
TONTOLON’NY ASA Mbola vitsy ireo mpiasa an-trano misitraka ny fiarovana ara-tsôsialy
Mbola vitsy amin’ny Malagasy no miditra eo amin’ny sehatry ny ara-dalàna amin’ny fampiasana olona hiasa an-trano. Mbola vitsy ireo manoratra ireo mpiasa any amin’ny Cnaps. Toy izany ihany koa ny fijerena ireo lafiny ara-pahasalamana ho an’ireny mpiasa an-trano ireny.
Ankoatra izay, mbola tsy voahaja ny zon’izy ireo, toy ny karama farany ambany tokony horaisiny. Maro nefa ireo voalaza fa mbola miasa mafy mihoatra izay tokony hataony ary mbola betsaka ihany koa ny ora hiasany mihoatra ny tokony izy. Betsaka ihany koa ireo olona miasa no tsy voahaja ny zony fa miaritra fampijaliana maro samihafa avy amin’ireo mpampiasa.
Voalaza ao amin’ny volavolan-dalàna vaovao vao nolaniana teny amin’ny antenimiera roa tonta nefa fa tokony hasiana fanitisiana ny tontolo iasan’ireo mpiasa an-trano. “Voalaza ao fa tokony hakarina ny karama farany ambany ho an’ny mpiasa an-trano. Tokony hisoratra ara-dalàna any amin’ny Cnaps ihany koa izy ireo. Ankoatra izay, mila hajaina ny ora sy fotoana tokony hiasany, ny lafiny ara-pahasalamana sy ny sisa”, hoy Solo Paulin, talen’ny asa sy ny fampiroboroboana ny zo fototra eo anivon’ny minisiteran’ ny Asam-panjakana, omaly.
Nanamafy ity tompon’andraikitra eo anivon’ny minisitera ity fa mbola miandry fandinihan’ny Filankevi-pirenena momba ny asa ny fampiharana izay voalaza ao anatin’ity volavolan-dalàna ity. “Mbola maro ny asa tokony hotanterahina sy ny asa tokony hatao manoloana ny fanatsarana ny tontolon’ny asan’ny mpanampy an-trano. Ilay karama farany ambany, ohatra, mbola lavitr’ezaka ny fanatanterahana azy satria mbola ambany ny fahefa-mividin’ny Malagasy”, hoy hatrany i Solo Paulin.
Voalaza ihany koa fa mbola betsaka ireo tsy manara-dalàna amin’ny fampiasana olona any an-trano ka mahatonga ny fanemorana ny fampiharana ity lalàna vaovao ity. Tsiahivina fa misy ihany koa ny fandaniana ny volavolan-dalàna hafa mahakasika ny tontolon’ny asa ihany teny anivon’ny antenimiera, toy ny mahakasika ireo olona miasa any ivelany. Mbola mijanona ho tsy azo atao aloha ny
mandefa olona miasa any amin’ireo firenena mety hahitana tsy fanajana ny zon’olombelona. Mbola miato ihany koa, araka izany, ireo olona misehatra amin’ny fandefasana mpiasa amin’ireo faritra ireo izany. Miandry ny fandalovany eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana kosa ireto lalàna ireo izay vao hoentina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
«LA GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR» :: Haharitra dimy andro ny tsenaben’ ny Noely sy ny faran’ny taona
LOZA NISESY ROA VOLANA :: Lehilahy telo hita faty tao amin’ny farihin’Andraikiba